कर्पोरेट नेपाल , १२ माघ २०७६, आईतवार, ०६:०२ pm
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार घण्टा लामो वार्ता गरेका छन् । विशेषगरी अमेरिकी परियोजना कसरी संसदबाट पास गर्ने ? विषयमा केन्द्रित रहेको जनाइएको वार्ता बिहान १० बजेबाट दिउसो २ बजेसम्म लगातार चलेको जनाइएको छ ।
वार्तामा एमसीसीबाहेक आसन्न सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने के के राजनीतिक एजेण्डा लैजाने ? एमसीसीका बारेमा उठेको चर्को आवाजको कसरी सामना गर्ने ? पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने, उपसभामुख कुन पार्टीलाई दिने विषयमा छलफल भएको भएको बालुवाटार स्रोतलाई उल्लेख गर्दै विभिन्न मिडियाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक यही माघ १५ गतेदेखि बस्दैछ । एमसीसीको विषयमा पार्टी ध्रुविकृत भएपछि ओली र प्रचण्डलाई यसको सामना गर्न कठिनाई भइरहेको छ । दुवै नेता एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि तलका अन्य नेताहरुले भने यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
नेकपा स्थायी समितिको निर्णय– एमसीसी के गर्ने ? भन्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिने
यो संसद रहँदासम्म ओली नै प्रधानमन्त्री, प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी…